Wararkii ugu dambeeyay.Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay Gaari lagu rasaaseeyay Galgaduud – idalenews.com
Wararkii ugu dambeeyay.Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay Gaari lagu rasaaseeyay Galgaduud
Inta la ogyahay Shan Ruux ayaa ku dhawacantay Rasaas ooda looga qaaday gaarigii ay saarnaayeen Xilli uu maraayay inta u dhaxaysa deegaannada Mareerguur iyo Gudin-labe ee gobolka Galgaduud.
Rasaasta ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay Fureen Kooxo ay jidgooyo u tiillay deegaannada Mareerguur iyo Gudin-labe, waxaana iminka dadkaasi oo uu ku jiro Canug yar la dhigay Isbitaal Duleedka Galgaduud ku yaalo.
Cabdiraxmaan Cali Maxamed Guddoomiyaha maamulka dowladda Soomaaliya ee Dhuusamarreeb, ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dadkaasi ay ku dhaawacmeen Rasaasta ay rideen Maleeshiyada jidgooyda dhigtay, waxa uuna sheegay Geeda-qorow in gaariga la rasaaseeyay uu ka yimid magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, isla markaana uu ku sii jeeday magaalada caasimadda dalka u ah ee Muqdisho.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in Ciiddamadad Ammaanka ay baadi goob ugu jiraan Raggii Dhaawacay Shacbkii saarnaa Gaariga, waxa uuna Tilmaamay in la soo taagi doono Maxkamad isla markaana la marsiin doono mudankooda sida uu hadalka u dhigay.
Si kastaba ha ahaatee, Cabdiraxmaan Cali Maxamed Guddoomiyaha maamulka dowladda Soomaaliya ee Dhuusamarreeb, ayaa ka shanqariyay in Ciiddamadda geystay weerarkaasi ay yihiin kuwa falaago ah oo ka weekday Awaamirta Maamulka waxa uuna wacad ku maray in Maamulka ay wax ka qaban doonaan.